My self | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » My self
Posted by မိုး မင်းသား on Nov 5, 2012 in History, My Dear Diary, Myanmar Gazette | 26 comments
မိုးမင်းသား ရဲ့ စစ်မှန်တဲံ့ ဘ၀
ဘ၀မှာ..လူတွေက သေပျော်ပြီ .နေပျော်ပြီလို့အဓိပ္ပါယ် အမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်ဆိုနေထိုင်ကြတယ် ။
တကယ်တမ်းတော့ ကိုယ်နေချင်သလို.. ကိုယ် လုပ်ပြ ချင်သလို မရဘူး ဆိုတာ ကို ကောင်းကောင်း သဘောပေါက် ရမှာပါ ။ ကျွန်တော့် ဘ၀မှာ.. လူမှန်းသိတတ်စ အရွယ် မှာ.. ဖေဖေ ဆုံးတယ် ။
ကျွန်တော်..လေးတန်းနှစ် အရွယ်ရောက်ပြန်တော့.. မေမေ ဆုံးတယ် ။ ရွှေတော်ကြိးတွေ..ပြို ကျ သွားတယ်..လို့ .. တင်စားချင်ပေမယ့်.. အမှန်တကယ်တော့… ကျွန်တော်..နားမလညသေးပါဘူး ။
ကျွန်တော် တို့ မှာ.မောင်နှမ ငါးယောက် ( ကျွန်တော် အပါအ၀င် ) ရှိပါတယ် ။။ ကျွန်တော် က အငယ်ဆုံး..ပါ ။
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့အကြီးဆုံးက အစ်မကြီးပါ ။ အစ်မ ကြီးက မိဘ နှစ်ပါး လုံး မရှိတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ကျန် မောင်နှမ များကို.. ရှာဖွေ ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်ပါတယ် ။
( တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့မှာ… ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ. ရှိပါတယ် ။ အဖေ အမေ တို့ ရှိတုန်းက အိမ်မှာ ၀င်ထွက် သွားလာ ချေးငှားနေတဲ့သူတွေက ကျွန်တော်တို့မောင်နှမ ငါးယောက်ကို စာတစ်စောင်တောင်
ရေးဖော် မရ ခဲ့ပါဘူး ။ ဒါကလည်း..ကျွန်တော်က ငယ်သေးတော့… အစ်မကြိးတို့ပြန်ပြောမှ သိခဲ့တာပါ )
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ် ကတည်း က ပြုစု ပျိုးထောင်ပေးခဲ့ တဲ့အစ်မကြီးက ယနေ့အချိန် ထိ မောင်နှမ တွေ အပေါ်.. မဟုတ်တာ မပြောသလို.. မမှန်တာလည်း.မပြောပါဘူး ။
အားလူံ့းက… ကျောင်းနေတဲ့ အရွယ်မို့အစ်မကြိးက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မျက်နှာ မငယ် ရလေအောင်… ကြိုးစား ရုန်းကန်ပြီး..အတတ်နိုင်ဆူုံး..ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက် ပါတယ် ။ ဘယ်သူ့ င်္ဆီမှာမှ လည်း..
အောက်ကျ မခံရပါဘူး ။ သူသာ သူစိမ်းတွေ ဆီမှာ.. အောက်ကျ ခံချင်ခံမယ် ။ ကျန်မောင်နှမ လေးယောက်ကို မျက်နှာ မငယ် ရအောင် ထားခဲ့ပါတယ် ။
လေးငါး နှစ်ကြာတော့.. ( အစ်မကြီးရဲ့အောက်က အစ်မ ) အထည်ချုပ် မှာ အလုပ်ဝင်ပါတယ် ။ ကျောင်းထွက်ပြီး.. တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ၀င်ငွေ ရအောင် ဆိုပြီး…
အလုပ် ထွက်လုပ်ပါတယ် ။ အဲဒီ အချိန်မှာ.. ကျွန်တော်တို့ညီ အကို သုံးယောက်က ကျောင်းတတ်ဆဲံပေါ့ ။
ကျွန်တော့် အစ်ကို နှစ်ယောက် က ပညာ ဘက်မှာ.. မထုးချွန်တော့ အစ်မကြီးကို..အားနြာ့ပီး.. ကျောင်းထွက်ခါ…
စစ်ထဲကို..၀င်သွားပါတယ် ။ အစ်မကြီးက အငယ်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ …. ကျွန်တော့်ကို… အတတ်နိုင်ဆုံး..ပညာတတ်တစ်ယောက် ဖြစ်အောင်..ပံ့ ပိုးပေးပါတယ် ။
တကယ့် တကယ် ကျတော့… ကျွန်တော်ဟာ… အရမ်းဆ်ိုးတဲ့ အထဲမှာ..မပါသလို… အရမ်းအေးတဲ့အထဲမှာ လည် မပါခဲံ့ပါဘူး ။
ဆယ်တန်း ကို နှစ်နှစ် ဖြေခဲ့ရပါတယ် ။
ကျွန်တော့်က သာမန် လူတစ်ယောက်မို့ … ကိုယ့်ကို ကိုယ်လည်း… အားမရ ခဲ့ပါဘူး ။ ဒီကြားထဲ… 88 အရေးတော်ပုံကြောင့်… ကျွန်တော်က ဒုတိယနှစ်နဲ့ ကျောင်းထွက်ခဲံ့ ရတော့ ကျွန်တော့် အစ်မကြီးက ရင်ထု မနာ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်.. ကျွန်တော် စိတ်ဆင်းရဲ မှာ စိုးလို့ …ဘာမှ မပြော ရှာပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် မချိတင်ကဲ.ဖြစ်မှာတော့ အမှန်ပါပဲ ။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးမှာ.. အစ်မ နှစ်ယောက် အလုပ်သွားပြီဆို..ကျွန်တော်က ယောင်ခြောက်ဆယ်နဲ့ 
အိမ်မှာေ စာင့်နေရ ပါတယ် ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းများစွာဆို့ နဲ့ လည်း… မတွေ့ဖြစ်တော့ပါဘူး ။
ကျွန်တော်လည်း..တစ်ဖက်တစ်လမ်း အကူ အညီပေး ရအောင် ဆိုပြီး… ကုမ္ပဏိီ တစ်ခုမှာ.. အလုပ်ရပါတယ် ။ Sale promoter တစ်ယောက်ပေါ့ ။ နယ် ထွက်ရတာနဲ့အိမ်ကို ကပ်ရတယ် မရှိပါဘူး ။
နယ်က ပြန်လာတာတော့… အစ်မ ငယ်က အိမ်ထောင်ပြုမယ်.ဆိုတာ သိရပါတယ် ။
အင်းလေ…. ကိယ့် ဘ၀ ကိုယ် ရပ်တည် ရပြီဆိုကတည်းက… ပါရမီ ဖြည့်ဖက် တစ်ယောက်တော့…လိုတာပေါ့ ။
အစ်မ ကြီးကတော့… သံယောဇဉ်ကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး.. ငို ရှာပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ အစ်မကြီးနဲ့ ကျွန်တော် နဲ့နှစ်ယောက်ပဲ..ကျန်ခဲံ့ပါတယ် ။
မရှေးမနှောင်း မှာပဲ… ကျွန်တော့် အစ်ကို နှစ်ယောက်က နယ်မှာ..အိမ်ထောင်ကျ ကုန်ပါတယ် ။ အစ်မကြီးက စိတ်မကောင်း ဖြစ်တဲ့ ကြားက… သူတို့လိုအပ်တာကို.. ကူ ညီ ပံ့ပိုးပေးရှာပါတယ် ။
အိမ်မှာ ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ထဲ. အထီးကျန် ဆန်ဆန် နေထိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
ဒီလိုနဲ့နေထိုင်ရင်း.. အစ်ကိုငယ်က မတ္တ၇ာ သူနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီး. ပူတာအို ၊ မြစ်ကြီးနား.. ၊ မန္တလေး.. တို့ ကိုပြောင်းရွေ့ နေထိုင်ရင်း ကလေးတွေ. ရနေပြီ.ဆိုတဲ့စာ လာလို့ .
အစ်မကြီးက ၀မ်းသာခဲ့ပါသေးတယ် ။
ဒီလိုနဲ့ရန်ကုန်မှော်ဘီဘက်ကို အပြီးပြောင်းလာကြပါတယ် ။ ကျွန်တော့်မရီးက ..ကလေး သုံးယောက်နဲ့ တစ်ဗိုက် ဖြစ်နေပါပြီ။
နောက်ဆုံးကလေးမွေးပြီး… ခြောက်လ အကြာမှာ.. ကျွန်တော့်မရီး ဆုံးပါးသွားပါတယ် ။ ကျွန်တော့် အစ်ကိုငယ်က ကလေး လေးယောက်နဲ့ … တပ်ထဲမှာ.. လုံးလည် ချာလည် လိုက်ပြီးနေတာကို.
တပ်မှုး က ဆေးပင်စင်နဲ့ ထွက်ခိုင်းပါတယ် ။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့အိမ်ကို.. ပြောင်းလာလို့ … အစ်မကြီးကဆို… ငါတို့ အိမ်က ပြန်ပြီး.စိုစိုပြေပြေ ဖြစ်လာပြီလို့ ..ပျော်နေရှာပါတယ် ။
အဲဒီ အချိန်မှာ…. ကျွန်တော့်မှာလည်း… လက်တွဲဖော် မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရှာတွေ့ထားပါတယ် ။ တူ တူမတွေကြားမှာ.နေထိုင်ရင်း ကျွန်တော်နဲံ့ အစ်မကြီးဟာ..ပျော်ရွှင်လာပါတယ် ။
မကြာပါဘူး ။ ကျွန်တော့်မရီး ဆုံးပြီးလို့သုံးနှစ် နဲ့ဆယ်ရက် အကြာမှာ… ကျွန်တော့်အစ်ကိုငယ်ဟာ… ငှက်ဖျားရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ပါတယ် ။
အစ်မကြီးနဲ့ကျွန်တော့် ကြားမှာ.ကလေး လေးယောက် က ကျန်ခဲ့ပါတယ် ။ ပြုစုပျိုးထောင်ပေး ရမှာ ကျွန်တေန်ာတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန် အပြည့် ဖြစ်သွားပါတယ် ။
သူတို့ အဖေ ထားပေးခဲ့တဲ့ … ပင်စင်လေးရယ်..ကျွန်တော်နဲံ့အစ်မကြီးနဲ့ . လ စာ ရယ်.. ကလေးတွေ အတွက်.. ကျောင်းစရိတ် ၊ စားစရိတ် ကျောင်းမှာ မျက်နှာ မငယ်ရလေအောင်..
ကျန်းမာရေး..လူမှုရေးတို့ ကို… ကျွန်တော်နဲ့ အစ်မကြီင်္း ပဲ.. စောင့်ရှောက်ရမယ့် တာဝန် ရှိတယ် မဟုတ်လား ။
ကျွန်တော်လည်း.ကျွန်တော့် လက်တွဲဖော်နဲ့လမ်းခွဲခဲ့ ရပါတယ် ။ ဘာလို့ လဲ..ဆိ်ုတော့… ဒီ ဒဏ်.တွေကို… သူ့ ဆီကို မကူးစက်စေချင်လို့ ….. ကျွန်တော် လက်တွဲ ဖြုတ်ခဲ့ရပါတယ် ။
အခုဆို… အစ်မကြီးနဲ့ ကျွန်တော် ဟာ….. ကလေးတွေကို. ချော့တစ်ခါ ခြောက် တစ်လှည့်နဲ့လမ်းကြောင်းမှန် ကို လျှောက်တတ်အောင်.. လမ်းကြောင်းမှန်ကို ပြသ ပေး ရင်း…
ကျွန်တော်တို့မောင်နှမ နှစ်ယောက်နဲ့ .. ကလေးတွေ..နဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင် ရင်းးး………………………………………………………….
ဒီ ပ်ိုစ့် နဲ့ … ကျေးဇူုးရှင် အစ်မကြီး အား…ဂါရ၀ ပြုအပ်ပါတယ် ။
မိုးမင်းသား ( မရမ်းကုန်း )
မိုးမင်းသား ( မရမ်းကုန်း ) လို့ရေးတာ.. မရဲတရဲကုန်း လို့ ဖြစ်သွားတယ် ။
သူကြီးရေ…..ကျွန်တော့် ပိုစ့်တွေ..တင်ပြီးတိုင်းမှာ. ပြန်ပြင်လို့ မရတာကြောင့်..
အခု..မရဲတရဲကုန်းဆိုတာကို မရမ်းကုန်း.လို့ ပြင်ပေးပါနော် ။
ဖတ်ရင်းနဲ့တောင် မော သွားတယ်
မိုးမင်းသားရဲ့ အမကြီးကတော့ လေးစားဘွယ် ချီးကျူးဘွယ် အပြည့်ပါပဲသူ့ စိတ်ထဲမှာ လုပ်သင့်လို့ လုပ်လိုက်တာ( ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်တာ)ပဲ ဘယ်သူ့ဆီက ဘာပြန်ရပါစေဆိုတဲ့ စိတ်ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး
ဒီရွာထဲက ပို့စ် လေးတွေကလဲ ပြတင်းပေါက်လေးတွေပဲ
ကိုယ် မသိသေးတဲ့ လောကကြီး အကြောင်းတွေ မြင်လာ သိလာရတယ်
၁၅၀၀ ထက် ၅၂၈ က ပိုပြီးကောင်းတယ် ..
ခင်ဗျားလည်း လူပျိုကြီး ဘဲ ..
မိန်းမ ယူနေနဲ့ဒေါ့ ..
ကိုယ့် မောင်နှမငယ်တွေအပေါ်မှာ ထားတဲ့
ကိုမိုးမင်းသား အမကြီးရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုတော့ဖြင့် ချီးကျူးမိပါရဲ့ ခင်ဗျာ ….
မိုးမင်းသား..( မရဲတရဲ ကုန်း… ) တဲ့ 
ဖြစ်သမျှ ရဲရဲရင်ဆိုင် ပြီး
အကောင်းဆုံး ဆက်ဖြစ်ဖို့ 
အစ်မကြီးက အနစ်နာခံတာ ချီးကျူးဖို့လည်း ကောင်းသလို၊သနားဖို့လည်း ကောင်းတယ်..
ကလေး ၄ယောက်ကို ၀မ်းနဲ့လွယ်မမွေးရပေမယ့်…အစစအရာရာ ကလေးတွေရဲ့အမေလိုပဲဖြစ်နေမှာ…
မင်းက မိန်းမယူပြီး မင်းအမကြီးသက်သာအောင်ကူခိုင်းရမှာလေ.။
လက်တွေ့ မှာတော့ ဒီလို့ ဘ၀တွေအများကြီးနော်
ကိုမိုးမင်းသားရဲ့ အစ်မကြီးကို ချီးကျူးမိပါတယ်ရှင်။ အနစ်နာခံတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ မလွယ်ပါဘူး။
ဒီပို့စ်လေးဟာ ရိုးရိုးလေးနဲ့ လှနေတဲ့ ပို့စ်လေးပါ။
” ကျွန်တော်လည်း.ကျွန်တော့် လက်တွဲဖော် နဲ့လမ်းခွဲခဲ့ ရပါတယ် ။
ဘာလို့ လဲ..ဆိ်ုတော့… ဒီ ဒဏ်.တွေကို… သူ့ ဆီကို မကူးစက်စေချင်လို့ ”
ကို မိုးမင်းသား ရေ ။
စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံမှုတွေကို လေးစားမိပါတယ် ။
အဘ မှာ အဓိက ယုံကြည်တဲ့ အဆိုအမိန့် ၂ ခုရှိပါတယ် ။
၁ ။ စိတ်ထားကောင်းရင် ကံကောင်းတယ် တဲ့ ။
၂ ။ Honesty is the best policy.
အောင်မြင် ကံကောင်း ပါစေဗျာ ။
ဒီနေ့ ရွာထဲ အဝင်နောက်ကျလို့ စာဖတ်ရုံဘဲ ဖတ်တော့ မယ်လို့ တွေးထားတာပါ။
မင်းရဲ့ စာစုလေးကိုဖတ်ပြီး မင်းရဲ့ အစ်မကြီး ကိုရော မင်းကိုပါ လေးစားလွန်းလို့ ဝင်ပြီး မှတ်ချက် ရေးလိုက်ပါတယ်။
ပြောစရာစကားလုံး ရွေးမရအောင်ကိုဘဲ လဲ ဖြစ်ရပါတယ်။
အဓိက သူ့ဘဝ ကို ခင်းပေးခဲ့ပြီး မောင်နှမ တွေကို စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ အစ်မကြီး ရဲ့ စေတနာ ကို ဘယ်လို စာလုံးနဲ့ မှ ပုံဖော်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။
မိုးမင်းသား တို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်လုံးရော ကျန်တဲ့ ကလေး များ၊ တစ်ခြားမိသားစု တွေပါ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ နဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စေဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
မိုးမင်းသားရေ ဘယ်လိုအခြေအနေဘဲ ရှိရှိ ကြိုးစားပါ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေထားပါ။ အိမ်မက်တွေ မက်ပါ။
တစ်နေ့ဖြစ်လာ မယ် တွေးပါ။
ဘဝ ဆိုတာ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ရုန်းကန်နေရတာပါဘဲ။
တစ်နေ့တော့ ရေစီးသာသွားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဖတ်ရပြီးတော့ စိတ်ထဲမှာ ၀မ်းသာဝမ်းနည်း ဖြစ်မိတယ်။
ကျမအဖေက အသက်ရ၆နှစ် ကျမအသက် ၃၇ မှာ ဆုံးသွားတယ်။
မောင်နှမတွေ (အိမ်ထောင်ကွဲရော အိမ်ထောင်မကွဲတွေရော) တစုတစည်းတည်း နေကြတယ်။
အဲလို အခြေအနေမှာတောင် အဖေကို မဆုံးစေချင်သေးဘူး။
အဲဒီအချိန်မှာ စဉ်းစားရင်း စဉ်းစားရင်းနဲ့ ……….
တချို့ဆို အမေ့ဗိုက်ထဲမှာကတည်းက အဖေဆုံးပါးသွားလို့ မြင်တောင် မမြင်ဖူးလိုက်တဲ့သူတွေဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
အဖေကမှ အသက် ၇၆နှစ်ထိ နေရသေးတယ်။
ငါဆိုရင်ရော ဘယ်လောက်ထိ နေရမယ်မသိသေးဘူး။
တချို့ဆိုရင် အမေ့ဝမ်းကမကျွတ်ခင်ပဲ ဆုံးပါးသွားရတာတွေတောင် ရှိသေးတယ်လို့………
မိုးမင်းသားရဲ့ အမကြီးကို လေးစားမိပါတယ်။
အမကြီးအမိအရာဆိုတာ အဲလို အမကြီးတွေအတွက် ဂုဏ်ပြုစကားပါပဲ။
အမကြီးရဲ့ ကျေးဇူးကို သိနားလည်တဲ့ မိုးမင်းသားကိုလည်း ချီးကျူးပါတယ်။
မိသားစုများအားလုံး သာယာချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ :hee:
မိုးမင်းသားတို့ အစ်မကို သိတတ်ပုံကြည့်ပြီး အိမ်ကမောင်တွေရဲ့ခေါင်းတွေ တန်းစီခေါက်လိုက်ချင်သနော်။
(ပြောသာပြောရ ကိုယ်လည်း အဲဒီ အစ်မ လောက်လည်း အနစ်နာခံနိုင်မယ် မထင်)။
မောင်နှစ်မ နှစ်ယောက်လုံးကို လေးစားပါတယ် လို့သာ ပြောချင်ပါတယ်။
မောင်နှမ နှစ်ယောက်လုံးကို လေးစားဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ရှင့်….
(ကောင်းလိုက်တဲ့ comment လေးတွေ)
၀င့်ပြုံးမြင့် says: “ဒီပို့စ်လေးဟာ ရိုးရိုးလေးနဲ့ လှနေတဲ့ ပို့စ်လေးပါ”
အရီးခင်လတ် says: “အဓိက သူ့ဘဝ ကို ခင်းပေးခဲ့ပြီး မောင်နှမ တွေကို စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ အစ်မကြီး ရဲ့ စေတနာ ကို ဘယ်လို စာလုံးနဲ့ မှ ပုံဖော်လို့ မရနိုင်ပါဘူး”
MaMa says: “အမကြီးအမိအရာဆိုတာ အဲလို အမကြီးတွေအတွက် ဂုဏ်ပြုစကားပါပဲ”
တကယ့်ကို Heart ထိသွားတယ်ဗျာ …. မိန်းကလေးရေ … မင်းကို မချစ်လို့လမ်းခွဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူး … ချစ်လို့လမ်းခွဲခဲ့တာပါ … အဲ့ဒီမိန်းကလေးလဲ သိမှာပါ….
၀တ္တုတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့ အမကြီးက အနစ်နာခံပြီးမောင်နှမတွေစောင့်ရှောက် အကိုအကြီးဆုံးက ဆရာဝန်ဖြစ်၊ အကို အလတ်က သဌေးသမီးနဲ့ညား၊ အမကြီးက အိမ်လာလည်တော့ မတူမတန်တွေဆက်ဆံ၊ အငယ်ဆုံးက မိုက်ပေမဲ့ အမကိုသိတတ်… အင်း.. လက်တွေ့မှာတော့ ဒီလိုပဲ မသေမချင်းတော့ ရုန်းကန်ရတာပါပဲ မိုးမင်းသားရယ်… :hee:
၈၈ မှာ ဒုတိယနှစ်ဖြစ်နြေုပီဆိုတော့ ကျနော်တို့ နဲ့ ရွယ်တူပဲပေါ့နော်
အစက ကိုယ့်ထက် ငယ်မယ်ထင်နေတာ..ရိုရိုသေသေ ဆက်ဆံပါတော့မယ်ခင်ဗျ
လေးစားစရာ ကောင်းတဲ့ မောင်နှမတွေလို့အသိအမှတ်ပြမိပါတယ်..
မရဲတရဲကုန်းနှင့် မလှမ်းမကမ်းရှိ ရဲရဲကုန်း-ဘီအီး
လူရော့ သွားသည်မရှိ …
ညီအစ်ကိုများရဲ့ ကလေးတွေကို…ခေါ်ယူကျွေးမွေး ကျောင်းထားပေးနေရတာပါ..
အိမ်မှာ လက်ရှိ စီမံ အုပ်ချုပ်နေသူကလည်း အကြီးဆုံးအမ အပျိုကြီးပါပဲ…
လုံမဆို အစ်မသာဆိုတယ်..မောင်လေးအပေါ်မှာ အနစ်နာခံတယ် သိပ်မရှိလှပါဘူး… လုံမနဲ့မောင်လေးနဲ့က အသက်သိပ်မကွာတာလည်း ပါပါတယ်…
အားလူံ့းက… ကျောင်းနေတဲ့ အရွယ်မို့အစ်မကြိးက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မျက်နှာ မငယ် ရလေအောင်… ကြိုးစား ရုန်းကန်ပြီး..အတတ်နိုင်ဆူုံး..ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက် ပါတယ် ။ ဘယ်သူ့ င်္ဆီမှာမှ လည်း..အောက်ကျ မခံရပါဘူး ။ သူသာ သူစိမ်းတွေ ဆီမှာ.. အောက်ကျ ခံချင်ခံမယ် ။ ကျန်မောင်နှမ လေးယောက်ကို မျက်နှာ မငယ် ရအောင် ထားခဲ့ပါတယ် ။
လုံမသာဆို လုပ်နိုင်ပါ့မလားလို့ တွေးမိပါတယ်….
ဦးစားပေးရတဲ့ဘ၀တွေ အများကြီးပါ စေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းတတ်
မတူတဲ့ ဘက် က မန့် ရရင် ကျမသာဆို ( ကိုယ် ကလည်း အကြီးဆုံး ဆိုတော့) အဲဒီ လို ကိုယ့် ဘ၀ တစ်ခုလုံး ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အတူ ရင်ဆိုင် နိုင်မယ့် ကိုယ့် အပေါ် နား လည် နိုင်မယ့် လက်တွဲ ဖေါ် ရှိခဲ့ ရင်တော့ အတူ လက်တွဲ ရင်းနဲ့ မှ မိသားစု ကို ပြန် ကြည့် မိမှာ ပဲ ( ကိုယ်တိုင် လက်ရှိ ကျင့် သုံးနေတာ)။ လူ့ ဘ၀ ဆိုတာ တိုတို လေး ပါ ၊ ဒုက္ခ တွေ ကို သယ်ပိုး ပြီး လူ့ ဘ၀ ခရီး ကြမ်း ကြီး ကို တစ်ယောက်တည်း လျှောက် ရ တာ တွေး ကြည့် ရုံ နဲ့ ပင်ပန်း လှ ပါတယ်။ မောင် နှမ၊ တူ၊တူ မ ဆိုတာ က လက်တွဲ ဖေါ်၊ သား ရင်း ၊သမီး ရင်း တွေ လောက် ကိုယ့် အပေါ် မလေး နက် နိုင် ပါဘူး။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲလို စွန့် လွှတ် နိုင်တဲ့ ကို မိုး မင်း သား တို့ မောင်နှ မ ကို တော့ အရမ်း လေး စား ပါတယ်။
တခါတလေကျတော့လည်း လူတွေက အပျိုကြီး လူပျိုကြီးဆိုတာနဲ့ အမနာပ ပြောချင်ဆိုချင်တတ်ကြတယ်။ ထေ့ချင် ငေါ့ချင်ကြတယ်။ ဒီလိုမျိုး အနစ်နာခံ စွန့်လွှတ်စိတ်နဲ့ နေနေကြတဲ့ အမကြီး အမိရာ တွေ အကိုကြီး အဖရာတွေ အများကြီး ပါ။
လေးစားပါတယ်။ စေတနာကောင်းရင် ကံကောင်းတတ်ပါတယ်။ တူသော အကျိုးပေးပါစေ။
ဘ၀မှာ ရုန်းကန်နေရတဲ့လူတွေ အများကြီးရှိပါလား ….. ကြိုတင်မမြင်ရတဲ့ အနာဂတ်ကိုလည်း တွေးမိပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်တယ်ဆိုတာ နားလည်လာမိပါတယ် ………
ဒီ ပိုစ့်လေးနဲ့ …ဒီ ကွန်မန့်တွေကိုသာ..
သူ… တော်တော်လေးကြည်နူးဝမ်းသာသွားမှာ..သေချာတယ်ဗျ ။
မိုးမင်းသားကြီး.. အစ်မကြီး ဖြစ်သူ ရဲ့ ကျေးဇူးတရားကို..ဖော်ကျူး..ပြလိုက်တာလေး.က အတော်လေး..
အဲဒီလို… မေတ္တာစေတနာ အစွမ်းတွေ..အစ်မကြီး.. နဲ့ ..
ကျေးဇူးတ၇ားကို… အစဉ် သတိရ တတ်တဲ့ကိုမိုးမင်းသားကြီး….တို့ ကို…
(ရဲရဲ ကော့ ..)
အေးမြတဲ့ ၅၂၈ မေတ္တာတွေကိုထွေးပွေ့ ရင်း..
၁၅၀၀ မေတ္တာကို ရဲရင့်စွာကျောခိုင်းခဲ့တဲ့ ကိုမိုးမင်းသား နဲ့ ..
မိမိဘဝ တစ်ခုလုံးကို မောင်နှမ တွေနဲ့ တူသား တွေအတွက်ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ အမကြီးတို့ ကိုလေးစားပါတယ်….
အလျှား အနံ မရှိပေမဲ့ အသွားအပြန် ရှိတာ မေတ္တာပါ….
ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ …..ကျွန်တော်..ကွန်မန့် တွေကိုဖတ်ရင်း…..
အားလုံးပို့ သတဲ့ မေတ္တာတွေကို….လက်ခံရင်း…ကျေးဇူးတင်ရင်း…..
ကျနော်တော့ ကျနော်အမ အမြဲပြောနေတယ်…ရှေ့ ကသူပိတ်နေလို့ ချည်း…
ကိုယ့်ဟာကိုယ်မစွံတာတောင် အမ ကိုအပစ်တင်သေး
ကျနော်ဒီပိုစ့်ဖတ်ပြီး..အိမ်က အမကို နဲနဲ အားတောင်နာလာတယ်…..
ကျနော်အခုအိပ်တော့မယ်…ည ၁နာရီ ၄၀ ရှိပြိလေ….
ဘုရားပါကန်တော့လိုက်တယ်..ကျနော်မမ ကို မပြောတော့ဘူး….လို့ ကျေးဇုးဗျ